HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulEminönü Eyüpsultan Alibeyköy Tram Line dia Hifarana amin'ny 2020
06 / 12 / 2019 34 Istanbul, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Faritra Marmara, TORKIA, tram
Ny tsipika mivoaka an'i eminonu eyupsultan alibeykoy dia hiafara amin'ny farany
Ny ben'ny tanànan'i Istanbul Ekrem İmamoğlu voalohany dia nahazo fampahalalana momba ny "asa ririnina Yol tamin'ny Dirteurement de la Maintenance Road sy ny fananganana fotodrafitrasa ao Edirkekapı, ary avy eo nifindra tany Eyüpsultan, Eminönü Eyüpsultan Alibeyköy Tramway, izay tsy vita ny fananganana hatramin'ny volana Novambra tamin'ny 2016. Fanadihadiana momba ny fananganana andalana. Imamoglu, ny làlamby mielanelan'ny Balat sy Feshane mijanona manodidina ny 2 kilometatra, niara-nandeha tamin'ny tokotany. Imamoglu izay manatanteraka ny fanodinana amin'ny làlan-dàlamby an-dàlana dia mamaly ny fanontaniana avy amin'ny mpanao gazety eto. Imamoglu, "Minisitry ny Ala sy ny rano Veysel Eroglu, taorian'ny fanambaranao ny haintany tany Istanbul," Efa niasa herinandro aho, efa vonona ny tetik'asa raha angatahina, hanampy ny baikon'ny Filoha izahay, "hoy izy. Hahazo fangatahana ve ianao ”,“ ny mpitantana foibe İSKİ, minisitra. Ny toro-hevitro amin'izy ireo dia hoe raha misy fotoana na fotoana iray dia afaka mifampiresaka amintsika izy raha tsy miandry baiko. Mitady azy isika. Ny olana maika sy manan-danja toy izany dia tsy miandry fangatahana. ”
Ekrem İmamoğlu, Ben'ny tanànan'ny Istanbul Metropolitan Munisipaly (IMM), dia nandray anjara tamin'ny fampisehoana natao tao amin'ny Direction Générale d'expertement et l'trementrement ao Edirnekapı. IMAMOGLU mpitantana senior dia niaraka tamin'ny mpiasa feno. Seyfullah Demirel, Lehiben'ny sampan-draharaha amin'ny fikojakojana ny làlana sy ny fotodrafitrasa fotodrafitrasa dia manome fanazavana ara-teknika momba an'i Imamoglu sy ny delegasiona miaraka momba ny fizotran'ny asa ho an'ny fanomanana amin'ny ririnina any Istanbul sy ny milina sy milina fanamboarana olona. Imamoglu, izay naniry ny mpiara-miasa amin'i IMM hamokatra latabatra iraisana mba hamahana ny olana, dia nilaza fa "Ny namako dia nanomana ny hanompo ny olom-pirenentsika amin'ny fotoana mitovy ary hanelingelina ireo fanakorontanana hiaina eny an-dàlana. Tsy mino aho fa hahita lesoka isika. Isan'izany ny vohitra. Vonona izahay hiala amin'ny firenentsika rehetra mankany afovoan-tanàna. Nilaza i 39, tapitrisa tapitrisa izahay no miasa. Taorian'ny famelabelarana, dia nihaona tamin'ny mpiasa i İmamoğlu ary nanao ny fizahana teny amin'ny saha.
TSORATRA MBOLA MORA KOKOA ORA FAHAGAGANA
Nafindra tany Edirnekapı tany Balat i İmamoğlu taty aoriana. İmamoğlu, sy ny mpitantana ambony ny IMM, dia nanatontosa ny fananganana ny Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tram Line, ny fananganana izay nanomboka tamin'ny Novambra tamin'ny 2016 fa tsy afaka namita tamin'ny fotoana nokasaina. I Imamoglu, izay nandeha tamin'ny lalamby, manodidina ny 2 kilometatra miala Balat mankany Feshane, no nahazo vaovao avy amin'ny manampahefana. İmamoğlu, izay nifanandrify tamin'ny fizotran'ny lasitra nataon'ny mpiasa teo anelanelan'ny lalamby dia nahazo fampahalalana avy amin'ny mpiasa tamin'ny fiatoana. Imamoglu, manao fonon-tànana sy tohan-tanana, fanamboarana lasantsy, tanterahina miaraka amin'ny fitarihan'ny mpiasa. Nandritra io fotoana io dia nisy sary miloko.
Imamoglu, namaly ny fanontaniana momba ny fandaharam-potoanan'ny lalamby ny mpanao gazety. Ireto ny fanontaniana napetrak'i Imamoglu sy ny valin'ny nomen'ny Filohan'ny IMM:
"Te-hamita ny tsipika eo alohan'ny labiera isika"
Nanomboka indray ny asa. Aseho toy ny iray andalana?
Aza ajanontsika, avelao hiantsoana tsipika somary miadana kokoa izy. Talohan'izay, misy alalana efa nomanina. Nanamontsina izy io satria tapitra; fa nanohy ny asany kely indray ny orinasa. Miasa amin'ny loharano fanampiny isika. Te-ho vonona amin'ny 2020 ity toerana ity izahay. Tsy ity andalana ity ihany, fa koa ny fandalovan'ny Unalogoı amin'ny 2020… Satria ny tsy fisian'ny famolavolana, misy ny tsy fisian'ny tetikasa. Ho any amin'izy ireo ny namako. Mandra-pahatongan'ny fijanonana farany, ny foiben'ny famindrana mifandray amin'ny zotra metro sy ny fizarana Sirkeci-Eminönü, mitohy ny famolavolana teboka tsirairay miaraka amin'ny rafitry ny mpandeha an-tongotra sy ny lalamby. Tsipika izay manafaingana sy fikarakarana be antsika. Tena be fiara ny fitaterana olona avy any Alibeyköy ka Eminönü sy Sirkeci. Saingy ny tena zava-dehibe kokoa dia miresaka momba ny fizahan-tany izahay. Amin'ny lafiny iray, tsipika mahafinaritra iray no natao mba hijery ny Volondava Volamena. Saingy indrisy fa nandroso tsikelikely izy. Te-hamita azy haingana araka izay azo atao izahay. Misy toerana lehibe eto. Isika manana tranom-bakoka eny amoron'ny Golden Horn. Mamolavola sehatra maitso mahafinaritra izahay. Misy ihany koa faritra ara-tantara manomboka any Balat ka hatrany Eyüpsultan. Izy io dia zotra mahomby izay manampy amin'ny fitateram-pizahan-tany sy ankehitriny, ary mijanona eo amin'ny tsipika Mecidiyeköy-Mahmutbey. Noho izany, dia miezaka mafy izahay hitondra ity tsipika mahafinaritra ity amin'ny mponina ao Istanbul ao amin'ny 2020.
Rehefa miteny ianao hoe 2020, rahoviana?
Raha miresaka momba ny fahatokisana dia tara ny fahavaratra. Ny somary fanta-daza kokoa, dia toa ny faran'ny taona. Afaka manafaingana izahay. Mazava ho azy fa resaka resaka ara-bola ihany koa izany. Misy olana ara-teknika ao anatiny, mifantoka amin'ny azy ireo namako. Saingy manantena aho fa hifarana eto isika.
Nahita an'i Kadir Topbaş izahay tamin'ny lanonana momba an'ity andalana ity, avy eo Mevlüt Uysal. Ankehitriny, amin'ny maha Ben'ny tanàna fahatelo, dia manadihady ity andalana ity ianao. Ohatrinona ny vola ilaina? Ohatrinona no sisa tavela ho isan-jato?
Hainao fa manana zo telo i Allah. Raha ny marina, ny 35 dia mijoro amin'ny sisin'ny sarany. Tsy nisy famatsiam-bola natao mialoha. Manodidina ny isanjaton'ny 60 dia namboarina ary hita ny famatsiam-bola. Rehefa vita ilay izy dia nijanona teo alohan'ny fifidianana ny orinasa ary rehefa tonga izahay, miaraka amin'ny antony manosika azy dia niroso tsikelikely ny fizotrany; fa amin'ny anaran'ny faran'ny andro dia mitaky famatsiam-bola be ny mpiantoka. Ka dia hofaraninay ny sisa 35. Ampifantohantsika manokana ity andalana ity. Satria sahirana amin'ny lamba manan-tantara izy. Ny toerana sasany dia mazava ho azy fa voarara noho ny fanirian'ny besinimaro ary koa sahirana. Ary mamafa ny haingana ireo fanararaotana ireo. Izany no iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra eto an-tany. Misy lanjany lehibe momba azy isika.
Homena famatsiam-bola avy any ivelany ve ny famatsiam-bola?
Mazava ho azy fa mitady ny loharano rehetra isika. Ny loharanom-baovao avy any ivelany dia toa mifanentana kokoa amin'ity vanim-potoana ity. Manana resaka misimisy kokoa izahay. Misy loharanom-baovao mijoro eo. Fa eto, ny fanarahan-dalàna, ny fanarahan-dalàna, ny fotoana lava, ny sasany mamela ... manan-danja daholo. Ny sasany amin'ny asantsika dia ho tonga amin'ny fandaharam-potoanan'ny fivoriambe. Ny olana sasany dia manana fankatoavana Ankara. Manaraka azy io amin'ny fomba feno isika.
"TRAFFIC YA TO GÖKSU," RANO-TENY ”TOKONY HO EROĞLU
Tevfik Göksu dia nanana olana momba ny fifamoivoizana tao Istanbul nandritra ny volana 6, 25 ve tsy tany nandritra ny taona maro?
Te hanao vazivazy izy. Fa heveriko fa nandeha lavitra be teo amin'ny bozaka izy. Tsy afa-nitafy izy. Ihany. Azon'ny daholobe ny tianao lazaina. Tsy mila mamaly izany aho.
Veysel Eroğlu, Minisitry ny Ala sy ny rano, Veysel Eroğlu, taorian'ny fanambaranao ny haintany tany Istanbul, "Efa niasa herinandro aho, vonona ny tetik'asa raha angatahina, hanampy ny baikon'ny Filoha isika," hoy izy. Hahazo fangatahana ve ianao?
Mpiandraikitra ankapobeny ISKI teo aloha. Ny toro-hevitro amin'izy ireo dia ny hoe raha misy fotoana na fotoana iray dia afaka mifampiresaka amintsika izy raha tsy miandry baiko. Mitady azy isika. Ny olana maika sy manan-danja tahaka izany dia tsy miandry baiko. Izay no torohevitra voalohany ho ahy. Ny olana faharoa dia ny; Misy olana Melen. Jereo, anio no taona tokony ho vita tahaka izao, ny taona 3 no taona nambaran'izy ireo. Amin'ny teny hafa, ny datin'ny farany tamin'ny 2016, izay nambarany ho herinandro voalohany tamin'ny Desambra, izay tsy maintsy hifarana ao amin'ny 3, dia nandalo tamin'ny taona. Fa maninona no tsy vita? Mbola tsy misy azo hivoahana intsony, satria misy ny fampiasam-bola fanampiny. Tokony hivoaka ny fampiasam-bola. Ary miresaka momba izany isika. Vita i Melen. Tsy nilaza izahay hoe: 'Tsy nisy nahavita. Misaotra betsaka amin'ilay asa efa vita. Mazava ho azy fa. Mora ve mandritra ny taona maro ny 25? Efa ampahefatry ny taonjato iray no nanjakany. Mitehaka izahay ary mankasitraka azy. Saingy mbola tsy tapitra i Melen. Ity olan'ny Melen ity dia tsy mifarana, hovahana ny olana raha vao araka izay azo atao. Izany hoe, tsy tokony hisy intsony ny fahatarana na ny olana ara-bola. Tsy maintsy handresena haingana araka izay azo atao. Nilaza aho fa tokony hanontany ny fitantarana ny fahadisoana rehetra nataoko ny Filoha. Tsy nilaza zavatra hafa aho. 3 no daty nantsoin'izy ireo fa hisokatra ny taona. Hafa ankoatra izay, araka ny nolazaiko; Raha te hanome antsika vaovao izy, heveriko fa tsy ilaina ny manafatra, serivisy ho an'ny daholobe io, misokatra ny varavarana. Mitady azy isika. Miantso azy ireo ny lehiben'ny tale jeneralin'ny İSKİ ary mangataka ny mombamomba azy ireo. Raha misy, dia hampiasa fandraisana anjara amin'ny fahafinaretana izahay. Ka ny hevitra rehetra, ny fahalalana tsara rehetra vokarina eto amin'ity firenena ity dia misokatra ho antsika.
"NAHOANA NO MAMPITADY DIA MELEN DAMO"
Ny lalàna dia nilaza fa i Melen dia milalao amin'ny lahateny rehetra. Voalaza fa nanome rano ho an'i Istanbul i Melen. Mivoaka ve sa mivoaka i Melen?
Tondra-dranon'i Melen, fa miresaka momba ny tohba isika. Rahoviana no tondraka ny Melen? Manao pirinty izao. Saingy tsy afaka atao pirinty amin'ny afovoan'ny fahavaratra na farafahakeliny izany. Nahoana? Ny rano ny renirano Melen dia ambany noho izany. Fa maninona no vita ny tohodrano Melen? Eo foana mandritra ny fananganana toeram-piterahana rano. 30 dia tetikasa isan-taona, samy manana asa ny tsirairay. Ny tiako tenenina dia misy olona nieritreritra an'izany tao anatin'ny 80 taona. Avy eo nisy olona nandray izany fanapahan-kevitra izany tsy misy ny drafitra fanjakana sy ny sisa sy ny sisa. Voalaza fa; Tapitra hatreo amin'ny 2016. Ary hangonina ny rano ao, na dia ao anatin'ny fotoana mahasorena indrindra aza, ny rano dia mety ho safotry ny rano avy eo, na dia ao anaty fotoana fohy indrindra aza. Saingy izao dia niroborobo ny renirano Melen, eny, avy ao aminay ny rano. Avy amin'ny Istırancalar ny rano. Olombelona daholo. Ka tsy misy maharatsy izany. Ny olana dia: Maninona no tsy nifarana ny tohodrano ny Melen? Inona no sakana tsy maintsy vita, inona no vato misakana? Ary ahoana no hamahana izany? Andao ho fantatra haingana momba izany. Tsotra ihany.
Rehefa vita ny fanadihadiana dia nanao vavaka tamin'ny zoma teo tao amin'ny Valide Sultan Mosque any Aksaray i İmamoğlu.
FIVORIANA FAMPISOROANA FIVORIANA ENY 2016
Ny asa tamin'ny Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tram Line dia nanomboka tamin'ny Novambra 2016. Rehefa vita ny rafitry ny gara 10,1 kilometatra 14, ny 15 dia afaka mitondra mpandeha an'arivony amin'ny lalana iray isan'ora. Ny tsipika manarona ny distrikan'i Fatih sy Eyüpsultan dia hitohy amin'ny morontsiraka volamena Horn an'ny saikinosy ara-tantara ka hatrany Eyüpsultan ary manomboka any mankany amin'ny gara IMM Alibeyköy Pocket. Ao amin'ny tram-dalana, mitohy famatsiana angovo avy amin'ny tany rafitra ampiharina voalohany ao Torkia (catenery maimaim-poana) no ampiharina. Ny rafi-pitondrana, izay manafoana ny fandotoana ny sary ateraky ny «tariby catenary», dia miorina amin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby mampiditra angovo avy anaty lalambe fahatelo izay napetraka teo anelanelan'ny lalamby roa. Amin'izany fomba izany, ny fiara dia ho voafehy amin'ny alàlan'ny rafitra elektronika feno. Ny làlan-dàlana dia ho hita ao anatin'ny sisin'ny Fatih sy Eyüpsultan; Kabataş-Bağcılar Tram sy Lisy an-tanàna ao amin'ny seranan-tsambo Eminönü eo amin'ny Station Eminönü, Hacıosman-Yenikapı Metro Line ary Küçükpazar Station, Eyüpsultan-Piyer Loti Kabinakan-tsiran'ny tariby sy onjam-piantsonan'ny tariby Eyüpsultan, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line ary Alibeyk. hiarahana amin'ny Metrobus Line ao amin'ny Station Ayvansaray. Ny tsipika dia hanome fampifangaroana ny fitaterana an-dranomasina avy amin'ny Eminönü, Fener, Balat, Ayvansaray ary Eyüp pier.
Ny lalam-piofanana Eminönü-Alibeyköy dia ho vita amin'ny volana 30
Nampidirina ny tsipika fampirantiana Eminönü-Eyüp-Alibeyköy
Eminönü - Projet Line Alibeyköy Tram
Ny alàlan'ny Eminönü-Alibeyköy dia nanomboka ny asan'ny tram
Ny EIA Process dia nanomboka tamin'ny Eminönü Alibeyköy Tram Line Project
Fanamarihana amin'ny fangatahana: Fanaraha-maso ny fantsom-barotra Eminönü-Alibeyköy Tram Line Mühendislik
Navoakan'ny Eminönü-Alibeyköy Tram Line
Eminönü - Alibeyköy Tram-dalana, pejy Project EIA dingana efa nanomboka ny fanorenana malefaka
Eminönü - Tetikasa Tratran'ny Alibeyköy Tram Tsy mila EIA ho an'ny fananganana fananganana…
Eminönü - Alibeyköy Tramway Project Fanamboarana sy asa elektromisika…
Fanamarihana Tender: Handray ny serivisy fanaraha-mason-tsivana amin'ny fanaraha-mason'ny injeniera…
Fanamarihana momba ny fividianana: Fanamboaran-dalana elektrônika sy fiara amin'ny fanorenana Tranoben'ny Eminönü-Alibeyköy
Inona no tsy fantatrao momba ny Eminönü-Alibeyköy Tram Line (Video)
Eminönü Alibeyköy Fampivoarana ny Tram-Line (Vaovao manokana)